Huawei ga-eweta Huawei Nova na IFA ọzọ na Berlin | Akụkọ akụrụngwa
Huawei ga-eweta Huawei Nova na IFA na-esote na Berlin
The Huawei emeputa Huawei yiri ka ọ na-akwụsị na-eke smartphone ụdị dị ka ya osompi Samsung. Ezinaụlọ ọhụụ ga - eso Huawei Honor na Huawei P ga - abụ ezinụlọ Huawei Nova. A elu-ọgwụgwụ ama iji na a kpọmkwem na-ege ntị. Ama a ga - adị nke emere na Septemba 2 na IFA na Berlin, A ga-atụ anya ngosi nke ngwaọrụ teknụzụ nke amabeghị ama.
Ya mere, n'ime oge niile nke IFA na-esote, anyị ga-ama nkọwa nke ama a maka oge ahụ anyị maara na ọ ga-enwe ezigbo nwayọ na enweghị ihe mmezi ọ bụla na mpụga ma e wezụga igwefoto.
Ihe omuma a bu ihe omuma n'ihi na anyi mara ngosi ngosi nke akwukwo nke Yu Chengdong, onye isi osote onye isi ulo oru, deputara site na weibo network ya na ihe ngosi posta. Mana anyị amabeghị ihe ndị dị mkpa dịka ndị na-ege ya ntị ma ọ bụ akụrụngwa ọ ga-ebu, ihe ndị anyị na-amabeghị ma ka na-egbu ndị ọrụ.
Huawei Nova nwere ike ịbụ mkpanaka nwere ihuenyo ihuenyo nke ụlọ ọrụ Huawei
Ọ bụrụ na anyị echebara ngwaike kachasị ọhụrụ nke Huawei wepụtara, Huawei Nova nwere ike ịnwe a 5,5-anụ ọhịa ihuenyo na a bukwanu nchikota nke ebule ebe nchekwa, ma anyị nwekwara ike na-ekwu okwu banyere ezinụlọ nke nnukwu mobiles nwere curved meziri dị ka Samsung Galaxy S7 Edge. Ofdị ngebichi a ga-arụ ọrụ site na Huawei mana anyị amaghị mgbe mbido mbụ ga-ebido ya, ọ nwere ike ịbụ Huawei Nova.
Huawei kwadoro dị ka nke a ịga gi na ngosi IFA, ngosi ngosi nke Samsung na Kobo Rakuten ga-anọkwa, n'etiti ndị ọzọ, mana ha agaghị abụ naanị ndị gosipụtara ma gosipụta ngwaahịa ha, ngwaahịa anyị ga-ahụ na ahịa n'oge na-adịghị anya Hà ga-adị mma dịka ndị ọrụ na-atụ anya ya? Kedu ihe ị chere?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Huawei ga-eweta Huawei Nova na IFA na-esote na Berlin
Ihe niile na-echere gị na gam akporo 7.0 Nougat